ဗမာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများ၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံက ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂလီအရေးအခင်း သဘောထားထုတ်ပြန် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂
လက်ခံရရှိသော “မြန်မာရေးရာဌာန၊ ဂျာမဏီ” ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဗမာပြည်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်လျက်ရှိသော င်္ဘလီများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို တင်ပြခြင်းနှင့် အမှန်တရားအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာသတင်းဌာနများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့ကို ပေးပို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၎င်းတို့၏ အကြံပေးချက်တွင် အဆိုပါနယ်စပ်ဒေသပြသနာနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအရေးအခင်းများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများမှ တရားမ၀င် လူခိုးဝင်မှုပြသနာမှ ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးစုပြသနာအဖြစ် လုပ်ကြံထားသော ဖြစ်စဉ်အား ရပ်တန့်တားဆီးပေးခြင်းပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
5 Responses to ဗမာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများ၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံက ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂလီအရေးအခင်း သဘောထားထုတ်ပြန်
bobogyi on November 16, 2012 at 1:19 pm
Dear all walks of ethnic people of Burma/Myanmar Germany Thanks and best regards for your fair and equitable vision to express and points up the realism not only all walks of Myanmar but also the World that the factual information of Bengalies in the Arakan State,Burma/Myanmar.
Human Right on November 16, 2012 at 5:05 pm
All of These problems playing from Myanmar military government .
ကြေးတောသား on November 16, 2012 at 9:30 pm
မှန်တာပေါ့။ဘန်ကီမုန်းတို့၊နာဗီလေးတို့၊ကင်တာနားတို့ကKnowledgeတော့ရှိတယ်။imaginationနည်းသကိုးဗျ။ဗမာ ပြည်ကဒုက္ခသည်အစစ်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေအရေးတောင်မကိုင်တွယ်နိုင်ဘဲနှင့်ဘင်္ဂလီတွေကိုဒုက္ခသည်လို့အသိအမှတ်ပြု ချင်ကြ သေးတယ်။တရားမဲ့နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘဲဗျ။
schere on November 18, 2012 at 12:23 am
(၁)ကျမကတော့ အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ် ရှိစေချင်တယ်။
(၂) နောက်ပြီးတော့ တစ်ပါးသူကို စော်ကားပြီး ပြောတာဟာ ကိုယ့်သိက္ခာကျတယ်ဆိုတာလဲ နည်းနည်းလေးတော့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။သိက္ခာမဲ့တဲ့သူတွေသာ သူများကို စော်ကားပြီးတော့ ပြောတာ။
(၃)အဲဒီလို မသင်တာဟာ မိဘတွေကလည်း မသင်တာပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း မသင်တာပါတယ်။
(၄)အဲဒီတော့ ကျမတို့ကတော့ ဒါကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာကို ထည့်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ဘာသာရေးမတူတာ၊ လူမျိုးမတူတာ၊ အတွေးအခေါ်မတူတဲ့သူတွေကို လေးစားသင့်တယ်ဆိုတာတော့ ထည့်ပြီးတော့ကို သင်ရမယ်လို့ ကျမ ဒီအတိုင်းပဲ မြင်ပါတယ်။
(၅) နောက်ပြီးတော့လည်း ဥပဒေအရလည်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို တားမြစ်တာလည်း ရှိရမယ်။
(၆) ဒါပေမယ့် ဥပဒေကြီးနဲ့ပဲ မပြီးဘူး။
(၇) စိတ်ကို ပြောင်းယူရမှာ။
ကျမ ခဏ၊ ခဏပြောတယ်၊
(၈)ကျမတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ စိတ်ဓါတ်တော်လှန်ရေး။ နောက်ဆုံးကျတော့ စိတ်ဓါတ်တော်လှန်ရေးပါ။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး မဟုတ်ပါဘူး။
(၉ )အစိုးရစနစ်တစ်ခုပြောင်းရုံနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကို မပြောင်းလို့ရှိရင် ဘယ်မှ ကျမတို့ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
(၁၀) စိတ်ဓါတ်ပြောင်းနိုင်မှ တိုးတက်မှု ရှိမှာပါ။
jin_123452003@yahoo.co.uk on November 19, 2012 at 4:48 am
မြန်မာနိုင်ငံကကုန်းလမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ ထိုင်းမလေးရှား ဘရူနိုင် အင်ဒိုနီးရျားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဆီသွာပါစေ